Ummeli weHemp - I-USDA Hemp Ukuhambisana & Iseluleko Sebhizinisi seHemp Cos
Abameli beHemp Basiza Abalimi
Abameli be-hemp kungaba nzima ukuthola ngoba imboni ye-hemp isencane kakhulu, kepha uRod Kight ku-NC noTom Howard e-IL bangabameli bezimboni zebhizinisi lakho.
Abameli be-Hemp, UTom Howard kanye URod Kight xoxa ngezinkinga zebhizinisi elibhekene nabalimi bakwaHemp, ngenkathi uMmeli uJeff Hall echaza ngemiphumela yangempela yomhlaba yokudideka komthetho ngamabhizinisi weHemp.
Uma ufuna ukuqala noma ukugcina ibhizinisi lakho le-cannabis, udinga ukubonana ummeli we-hemp mayelana nezenzo nemithethonqubo engenzeka. Kusetshenziswa imithetho ehlukene ezifundazweni ezahlukahlukene e-US, futhi ummeli omuhle we-hemp angakusiza ukuthi uhambisane nemithetho futhi ugcine ibhizinisi lakho le-cannabis liphephile. Nazi izinto ummeli ofanele we-hemp angakusiza ngazo.
Ukulungiswa Kwekhontrakthi ye-Hemp Nokubuyekezwa
Uma uqala ibhizinisi le-cannabis, ngisho naku-hemp, kunezinkontileka eziningana okudingeka uzenze. Ukuchaza isikhundla sakho ebhizinisini le-cannabis kubaluleke kakhulu. Noma ngabe ufuna ukuba ngumprosesa, umlimi, noma umthengisi, udinga ukwazi ukuthi yimaphi amalungelo akho nezibopho zakho esimweni esithile. Ummeli we-hemp angakusiza ukuthi uqambe inkontileka efanele esebenza endaweni yakho ngqo.
Oxhumana nabo phakathi kwabanikazi bebhizinisi le-hemp kufanele babe nezici ezahlukahlukene nezindima zebhizinisi. Udinga inkontileka uma uhlela uku:
• Thenga noma uthengise imikhiqizo ye-hemp noma ye-hemp
• Thenga noma uthengise ibhizinisi noma impahla yebhizinisi
• Yenza isivumelwano sokubambisana kwebhizinisi
• Yenza isivumelwano sokuqasha
• Yenza isivumelwano sokucubungula i-hemp
• Yenza isivumelwano sezingxabano ezibandakanya imali namalungelo abantu
Kunezinhlobo eziningi zezinkontileka ongazenza phakathi kwamaqembu nommeli we-hemp angakusiza ukubhala, ukubuyekeza, noma ukuxoxisana ngenkontileka efanele esebenza ebhizinisini lakho. Ukubhala inkontileka kubaluleke kakhulu ekuxhumaneni kwebhizinisi ngoba ungazivikela ezimeni lapho iqembu elilodwa lingalandeli amaphuzu esivumelwano.
Isivumelwano sokubambana ngesandla noma ngamazwi asikwazi ukukuvikela ukuqhathanisa kahle nendlela isivumelwano esibhaliwe esingavikela ngayo amalungelo akho.
I-USDA Hemp Ukulawula Ukuhambisana
UMnyango Wezolimo wase-United States (i-USDA) ushicilele izimiso ezisemthethweni ngoLwesine, ngo-Okthoba 31, 2019. Kule mithetho, i-US Domestic Hemp Production Programme iqala ukusebenza nemininingwane ethinta ukukhiqizwa kwe-hemp. Imithetho yesikhashana ibonwa njengethuba lokuthuthukisa ukukhiqizwa nokuthengiswa kwe-hemp yasekhaya, okungazuzisa abakhiqizi nabathengi baseMelika. Izizwe nezizwe zamaNdiya zizoba negunya eliphakathi kohlelo oluvunyiwe lwe-USDA.
Njengengxenye yemithethonqubo yesikhashana, singakhomba ukukhathazeka okuvame kakhulu okuphathelene nokulandelayo:
• Ukuqinisekiswa kwembewu ngokususelwa endaweni, terroir, kanye nezimo zokutshala jikelele
• Ingqikithi yemithethonqubo yokuqukethwe ye-THC esebenza ngokugxila ku-THC naku-THCA
• Ukuhlolwa kuma-labs abhalisiwe ahambisana ne-Drug Enforuction Administration (DEA)
Ngaphakathi kwale mithetho, izifunda kanye nezizwe zingahambisa uhlelo oluqapha futhi lulawule ukukhiqizwa kwe-hemp. Izidingo ezibalulekile zezinhlelo zombuso kumele zifake phakathi ukwabiwa kanye nokuqoqwa kwemininingwane, amasampula kanye nokuhlolwa kwamazinga okuhlushwa e-THC, ukulahlwa kwezilimo ezingahambisani, kanye nokuphoqelelwa okuqondisa ukuthi i-hemp iyenziwa ngokwemigomo yesikhashana.
Imibuzo eminingi iphakama uma kukhulunywa ngemithetho ethile yombuso, yingakho ummeli we-hemp angakunika imiyalo efanele esebenza esifundazweni sakho. Kubalulekile ukucubungula zonke izindaba ezihambisana nezinhlelo ze-USDA esifundeni esithile. Ngale ndlela, uzivikela wena nempahla yakho ebhizinisini le-cannabis.
Ukuhambisana Nokubambisana Kwezwe Hemp
The Umthetho Oyilwayo Wango-2018 Wepulazi isigaba sashintsha izincazelo nemikhawulo ezihlobene nemithetho ye-hemp yezimboni kusuka kuMthethosivivinywa Wepulazi owedlule we-2014. KuMthethosivivinywa Wezolimo wase-2018, siyabona ukuthi umthetho uguqula imithetho mayelana nokukhula nokutshala i-hemmp yezimboni. Njengomphumela, izifunda kanye nezinhlanga manje zingathumela uhlelo nokusetshenziswa mayelana nokukhiqizwa kwe-hemp esifundeni noma endaweni yezizwe.
Isihloko Esihlobene: Wawusebenza Kanjani Umthethosivivinywa Wasepulazini I-Hemp… .Nensangu ???
Abenzi benqubomgomo State bangabhekana nezinkinga ezahlukahlukene zenqubomgomo-kusuka kwencazelo ye-hemp kuya kwelayisense, izitifiketi, amakhomishini, namalungelo okuvikela. Okungenani izifunda ezingama-47 zinemithetho yokwenza izinhlelo zokutshala nokukhiqiza i-hemp yezimboni.
Izindawo ezithile okubalwa kuzo i-Idaho, iSouth Dakota, iMississippi kanye neSifunda saseColumbia zisemkhankasweni wokuthola isibonelelo esigcwele sokutshala i-hemp.
Ezokuqina Komthetho Ezemfundo Nokugwema
Endabeni yesifundazwe sase-Illinois, singabona ukuthi umbuso ulungiselela kanjani ukuthobela ukusebenza komthetho okusha. Iziphathimandla zithi umthetho omusha awusekho ezincwadini, kodwa usebenza ngezindlela eziningi ezahlukahlukene. Esifundazweni sase-Illinois, wonke umuntu ulungiselela ngokuphelele ukubhalisa insangu kwezomthetho. Ukuphoqelela imithetho emisha kuzoshintsha ngokuphelele umbono wabaninimabhizinisi abaningi be-cannabis.
Isimo esifanayo senzeka naseColorado eminyakeni eyisithupha edlule lapho insangu yokuzijabulisa isemthethweni. Ngolunye usuku, i-cannabis yayingekho emthethweni, futhi elandelayo, yayingokomthetho ngemithetho esemthethweni. Lolu shintsho luthinte imikhakha eminingi yempilo, ukusuka kwimithetho yokushayela kuya kwimigomo yezinga le-THC. Isimo saseColorado saba esokuqala ukuzwa ukusebenza komthetho omusha. Sisakwazi ukubona abashayeli abashayela ngaphansi kwethonya insangu, okungenye yemiphumela yensangu esemthethweni.
I-Cannabis isiphenduke into enkulu eColorado. Ukutholakala nensangu kuvunyelwe ngaphansi kwezimo ezithile. Endleleni, singabona izinhlelo eziningi zokuhlobisa ezixhaswe yizinkampani zensangu. Amabhizinisi amaningi asekela izinhlelo zawo ekuphakamiseni nasekukhangisweni kwemikhiqizo yensangu. IColorado iyisibonelo sokuqala sendlela imboni ye-cannabis engaguqula ngayo izimo zebhizinisi esifundazweni esisodwa.
Kusele ukubona ukuthi hlobo luni loshintsho oluzokwenzeka esifundazweni sase-Illinois nakwezinye izifundazwe ezilungiselela ukuzijabulisa ngokusemthethweni kwensangu. Ngokusho kokuqagela okungokoqobo, inani elingaphansi kwama-30 amagremu we-cannabis flower lizoba semthethweni ezingxenyeni eziningi ze-Illinois ngo-2020.
Umthetho omusha uzokwakha imakethe evulekile yabathengisi bezidakamizwa kanye nemisebenzi yobugebengu. Kodwa-ke, izakhamizi zizokwaziswa ukuthi zithathe imikhiqizo ye-THC kuphela emithonjeni esemthethweni. Lokhu kuzodala amathuba amaningi abanikazi bebhizinisi ukusabalalisa ngokomthetho insangu nemikhiqizo ye-cannabis.
Endabeni yokuthobela umthetho ngokomthetho, umnikazi webhizinisi kufanele athathe izinyathelo ezidingekayo ukuvikela izinhlelo zebhizinisi nezezezimali. Ukukhuluma nommeli we-hemp kunganyusa kakhulu amathuba okuthola amalayisense afanele ngaphansi kwemithetho yezwe esemthethweni.
Thintana nabameli be-Hemp
Thintana nommeli weHemp kwebhizinisi lakho:
ENorth Carolina - kepha ukukhonza amakhasimende e-hemp ezweni lonke ezindabeni zombuso - Ummeli uRod Kight
E-Illinois, futhi nokusebenzela amaklayenti e-hemp ezindabeni zombuso kanye nokubonisana ezweni lonke - Ummeli uThomas Howard
Ukukhonza abanikazi bebhizinisi be-hemp abasolwa ngokungafanele benensangu - Ummeli uJeff Hall.